Statistika sy fironana momba ny asa aman-draharaha amin'ny tambajotra sosialy 2014 Martech Zone
Statistika sy fironana momba ny orinasa amin'ny tambajotra sosialy 2014
Alarobia, Oktobra 1, 2014 Talata, Septambra 1, 2015 Douglas Karr
Tsy mandeha na aiza na aiza ny haino aman-jery sosialy, ary tsapan'ny orinasa ankehitriny fa raha te-hanatratra ny vinavinany sy ny mpanjifany izy ireo, ny fisian'izy ireo an-tserasera amin'ny media sosialy dia fototry ny paikadin'ny varotra ankapobeny. Ity infographic ity dia endrika lalina sy lalina, amin'ny alàlan'ny indostria, salantsalany ary fantsom-piarahamonina, momba ny fomba fampiasan'ny orinasa ny media sosialy hifandraisany amin'ny mpanjifa.
Na ny orinasa kely na ny lehibe dia samy mahatsapa ny fitaoman'ireo mpisera media sosialy amin'ny hevitry ny daholobe. Tsy nahagaga raha nitady an'ireto influencer ireto tamina tranonkala media sosialy isan-karazany ny orinasa ary nandefa santionany vokatra maimaimpoana ho azy ireo hijerena azy ireo. Amin'ity sary manaraka ity, Orinasa amin'ny media sosialy - statistika sy fironana, Go-Gulf dia manolotra statistika sy fironana maromaro izay mampiseho ny fomba fampiasan'ny orinasa haino aman-jery sosialy hitombo ny fandrosoan'ny orinasa.
Tags: haino aman-jery sosialy b2bfahatsapana fiasaantontan'isa momba ny haino aman-jery sosialyfihenam-bidyfananganana orinasa facebookgoogle + fananganana orinasafiry minitra isan'androfananganana orinasa Instagrammarika mihajahaino aman-jery sosialy findayfananganana orinasa hendryfisondrotanaantony hanarahana marika amin'ny media sosialymedia sosialy smbhaino aman-jery sosialyfihenam-bidy amin'ny media sosialyfampiroboroboana ny media sosialystatistikan'ny fividianana media sosialyfahatsapana ny haino aman-jery sosialykarazana atiny media sosialystatistikan'ny tambajotra sosialyfananganana orinasa twitterfitondran-tena mividy twitter
Ireo fanontaniana tsy apetraka momba an'i Ello
Inona no atao hoe Marketing Viral? Ohatra vitsivitsy sy ny antony niasan'izy ireo (na tsia)
Oct 2, 2014 amin'ny 8: 00 AM
Tiavo ny sary! Mizara amin'ireo mpanaraka ahy izao! Ny media sosialy dia be mpampiasa ankehitriny, saingy mbola gaga ihany aho hoe firy no manao izany amin'ny fomba tsy mety. Zava-dehibe ary araraoty tsara ny fotoanany mba hanaovana fikarohana sy famakiana marketing ara-tsosialy mba hahazoana antoka fa vita amin'ny fomba tsara izy io!
Oct 2, 2014 amin'ny 11: 11 AM
Misaotra Brandon! Amim-panajana - Tsy azoko antoka ny fomba “marina” na “diso” hampiasana ny media sosialy amin'ny maha orinasa azy. Mahita ny sasany aho fa manao doka sy fihenam-bidy fotsiny - saingy mahazo taham-panavotana lehibe izy ireo ka iza aho no hitsara? Heveriko fa ny orinasa tsirairay dia mila manandrana ary mijery izay mety aminy sy amin'ny mpihaino azy.
Dec 24, 2014 amin'ny 6: 46 AM
Ny fisoloanao sary dia mahafinaritra ary tena nianarako zavatra betsaka avy amin'izany. ASA VOAZAVA TSARA! Vady miasa tsara
22 Jan 2015 amin'ny 2:50 PM
pejy web mahavariana ity. mihoatra ny fanampiana, misaotra
20 Feb 2015 tamin'ny 10:36 maraina
Ny tapakila ara-tsosialy dia manamafy ny lesoka fa ny tsy fivadihan'ny marika dia miorina amin'ny fihenam-bidy. Fomba tsotra hampiakarana vetivety ny varotra izany.
20 Mey 2015 tamin'ny 12:42 hariva
Tsy haiko hoe manaiky tanteraka aho. Raha tsapan'ny mpanjifanao fa misy ny fandrisihana ny hifikitra aminao lava, dia hifikitra aminao matetika izy ireo. Ny ankamaroan'ny orinasa manao ny mifanohitra amin'izany. Manisy fihenam-bidy ho an'ny mpanjifa vaovao izy ireo ary avy eo mampiakatra ny mpanjifa efa misy… izay mandrisika ny fifanakalozana ho solony.
Mar 13, 2015 ao amin'ny 6: PM PM
Fampahalalana tsara miaraka amin'ny sary info. Hizara amin'ny mpanjifa aho momba ny sehatra matanjaka amin'ny media sosialy. Misaotra nanome!
Mar 30, 2015 amin'ny 9: 59 AM
Tena ilaina! Raha tsy mampaninona anao izany, azoko atao ve ny mampiasa izany amin'ny sary? (Mpianatra amin'ny sekoly famolavolana aho)
Mar 30, 2015 amin'ny 10: 49 AM
Mila mifandray amin'ny orinasan-tsarimihetsika tany am-boalohany ianao, nahazo ny lohateny hoe Roxie. Mirary ny soa indrindra.
Apr 14, 2015 amin'ny 2: 35 AM
Androany, ny haino aman-jery sosialy dia lasa motera fikarohana hafa izay tena tadiavin'ny mpampiasa ny antsipiriany momba ny vokatra na serivisy. Na i Bigger Brands koa dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny fisian'izy ireo an-tserasera amin'ny Media sosialy.